Mogadishu Journal » 2019 » October » 8
Rep. Ilhan Omar (D-Minn.) has filed for divorce from her husband, Ahmed Hirsi, claiming an “irretrievable breakdown” in their marriage. The split follows allegations from August that Omar was having an affair with a political consultant, Timothy Mynett, who has worked for the...
Mjournal :-Tababaraha kooxda Man United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxaa saaran cadaadis kadib guuldaradii lama filaanka aheyd ee ka soo gaartay kooxda Newcastle ciyaar ka tirsaneyd Premier League. Manchester United ayaan ceyrin doonin Ole Gunnar Solskjaer inkasta oo guuldarro 1-0...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhambaal u diray Ismaaciil Cumar Geelle, Madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti,waxa uuna uga tacsiyeyay geerida ku timid, Alle ha u naxariistee marxuum Sacad Cumar Geelle. “Waxa na soo gaaray...
Mjournal :-Maanta oo Talaado ah ayaa qorsuhu ahaa in uu furmo kal-fadhiga 5aad ee Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed,kaas oo ahaa kulankii ugu dambeeyey,hayeeshee uu dib u dhacay. Magalada Baydhabo waxaa ku sugan Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan &...
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay Nin dhalinyaro ahaa oo saaka lagu dilay inta u dhexeysa Isgoysyada Siinaay iyo Darjiinka ee magaalada Muqdisho, iyadoo Kooxihii dilka geystayna ay goobta ka baxsadeen. Sida wararku sheegayaan waxaa la toogtay nin watay Mooto Fekon oo...
Mjournal :-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka aysan hor is-taagi doonin Turkish-ka oo la filayo inay weeraraan Kurdish-ka Syria, hase yeeshee waxa uu ku hanjabay inuu burburin doono dhaqaalaha Turkiga, haddii ay ku fogaadaan. “Haddii ay...
Mjournal :-Xildhibaan Ilhan Cumar oo Congress-ka Maraykanka ku metasha Minnesota ayaa dacwad furitaan ah ka gudbisay seygeeda Axmed Xirsi. Ihaan Cumar ayaa maxkamad ku taalla Minnesota u gudbisay dacwaddaasi maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay. Ilhaan iyo Axmed ayaa waxay...
Mjournal :-Magaalada Jiddah ee dalka Sacuudiga Carabiya waxaa lagu qabtay Shirweynaha Khubarada horumarinta hiddaha iyo dhaqanka ee Wadamada iskaashiga Islaamka, iyada oo sanadkaan Soomaaliya ay ka qeyb-gashay. Soomaaliya shirkaasi waxaa uga qeyb-galay Agaasimaha Waaxda Hidaha...
Mjournal :-Maamulka Jubbaland ayaa mar kale ugu baaqay dowlada federaalka Soomaaliya in si shuruud la’aan ah xabsiga uga sii deyso Wasiirka Amniga Maamulkaasi Cabdirashiid Janan oo ku xiran Muqdisho. Madaxweyne ku xigeenka Koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, Maxamuud Sayid...
Mjournal :-Roobka Deyrta ee saacadihii la soo dhaafay ka da’ay Magalada Muqdisho ayaa waxa uu sababay in wadooyin badan oo ku yaalla Magalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya inay xirmaan,isla markaana aan la mari karin. Wadooyinka xirmay ee uu roobka saameeyey ayaa waxaa kamid...